Olee otú Chọta na Download YouTube Full-ogologo Movies
> Resource> YouTube> Olee otú iji Chọta na Download YouTube Full Movies
Gara bụ ụbọchị mgbe YouTube bụ a n'elu ikpo okwu na-ekiri vidio egwú naanị. Ugbu a, e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-ahụ na YouTube gụnyere ndụ na-egosi, ọhụrụ ozi ọma na zuru-ogologo Hollywood fim ma ọ bụ trailers. Ka mbụ ahụ ndepụta nke fim na-enweta oké ewu ewu na YouTube n'agbanyeghị na ụfọdụ n'ime ha naanị hapụ trailers. Na mgbe ahụ ị ga-ọkọnọ na ngwọta ịhụ na ibudata YouTube trailers na zuru-ogologo fim.
Part 1: A ndepụta nke na-ewu ewu nkiri na YouTube
Part 2: Olee otú ịchọta YouTube fim
Part 3: Olee otú ibudata YouTube fim
Ebe a na-10 na fim na-ewu ewu na YouTube. Ụfọdụ n'ime ha na-adịghị na-ogologo fim ma, ma ị gaghị eche kwa ogologo.
1. The Agụụ Games: Ozugbo Fire
Akụta Fire, a sequel nke Agụụ Games starring Jennifer Lawrence ka mesịrị bụrụ 10th kasị elu-grossing nkiri site na-eme USD 423,6 nde. The nkiri na ọtụtụ-chọgharịrị on YouTube.
2. Fast & oké iwe 6
Dabere na ọsọ agbụrụ ka ya na-esote na Afrika, Fast & oké iwe 6 nwere Dwayne Johnson, Vin dizel na Paul Walker dị ka ndị na-alọtanụ nkedo niile kpakpando ndị na-eluigwe na ala blockbuster franchise.
Dị ka ihe Australian-American 3D ejije nkiri, The Great Gatsby e wepụtara na 2013 starring Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Elizabeth Debicki, Joel Edgerton na Tobey Maguire. Baz Luhrmann bụ onye edemede na onye nduzi nke ihe nkiri.
Starring Gravity George Chukwu na Sandra oke-ehi, Gravity bụ a obi-Anam Udeme thriller nkiri na-ewe gị enweghi ngwụcha nke alaeze miri ohere. Oke-ehi na arụ orụ di uma nke a amamiihe ọgwụ engineer Dr. Ryan Nkume onye bụ otu mbụ ya mgbagharị ozi na a vetiran astroloji Matt Kowalsky egwuri site Chukwu.
5. The Hobbit: The Mbibi nke Smaug
'The Hobbit-The Mbibi nke Smaug' bụ ihe adventurous nkiri dabeere na aha agwa Bilbo Baggins egwuri site Martin Freeman. Ian McKellan egwuri Ọkachamara Gandalf onye njem na Bilbo Baggins.
Despicable Me bụ a n'ụwa nile blockbuster film site Universal Pictures na ìhè Entertainment na ọbịa na kiriri ofụri afọ na 2010 na ọbụna ugbu a grossing karịrị $ 540 nde. The film ghọrọ 10th nnukwu animated emegharị na akụkọ ihe mere eme nke United States.
Rush bụ a na-akpali akpali ezi akụkọ nke ụwa kasị ukwuu rivals- mara mma English playboy ichu nta na amamiihe ama Lauda. The adọrọ adọrọ ọlaedo afọ nke F1 racing nyere mama na ka ọ bụrụ otu n'ime ihe ndị kasị-chọgharịrị na anya nkiri na Facebook.
Philomena dabeere Martin Sixsmith si 2009 investigative akwụkwọ 'The Lost Child nke Philomena Lee'. The nkiri bụ akụkọ nke a nne Philomena Lee egwuri site Dench, bụ onye chepụtara a nwata n'alụghị di na-eme esetịpụ elu uche na Irish-Catholic obodo. Nke a na-amanye ndị nwaanyị inye pụọ nwa ya maka nkuchi na US.
Director Jon Favreau ka, ya nkiri Elf, ẹwụtde ihe American Christmas ntochi. The nkiri kpakpando James Caan, ga-Ferrell, Zooey Deschanel, Bob Newhart na Ed Asner. The nkiri e depụtara n'etiti n'elu iri kasị-ele Hollywood fim.
10. Christmas Ezumike
Starring Beverly D'Angelo na Chevy Chase, Christmas Ezumike na-dabeere Christmas ntochi wepụtara na a 1989 n'okpuru nduzi nke Jeremiah S. Chechik. John Hughes ka e dere nkiri, nke bụ atọ nkeji nkeji na Ezumike film sequels nke National Lampoon.
Nkebi nke 2: Olee otú ịchọta YouTube zuru fim
Ebe a bụ ụfọdụ oké ụzọ na-zuru-ogologo nkiri na YouTube.
#Solution 1 Chọgharịa site YouTube nkiri ọwa ozugbo
YouTube nwere nkiri ọwa onwe ya. Site na nke a, ị nwere ike ịchọ a zuru-ogologo nkiri na gị na ndị ọzọ bulie dị ka ọkacha mmasị na-eso ndị ọzọ.
#Solution 2 Search na na YouTube
Ị nwere ike kpọmkwem ịchọ fim site na iji kọmputa ede kpọmkwem aha nkiri na YouTube si search igbe. Mgbe ahụ, pịa iyo iji họrọ Long (20 ~ nkeji) na Duration taabụ. Mgbe ahụ, ị nwere ike ịme nchọgharị site na search results na ngwa ahụ zuru-ogologo nkiri ị chọrọ.
#Solution 3 Site-atọ ndị ọzọ website
I nwekwara ike ịtụle achọta gị nkiri site-atọ ndị ọzọ weebụsaịtị ka Zero Dollar Movies. Nke a bụ ọhụrụ na saịtị na-eje ozi dị ka oké ikpo okwu maka nkiri buffs na-enyere aka na ị chọọ na-achọpụta na zuru-ogologo fim maka free on YouTube.
#Solution 4 Site ihe ndị ọzọ curated
Dị ka e nwere otutu fim na vidiyo na YouTube, ọ na-aghọ nnọọ mgbagwoju anya ịchọta otu nke kasị mma. Nke a bụ ebe video curators egwu a dị ịrịba ama ọrụ site sorting si ma na-ekpokọta ihe kasị mma videos na fim na playlist on YouTube ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ website. Ebe a bụ ndepụta nke oké fim na YouTube.
Nkebi nke 3: Olee otú ibudata YouTube fim
Mgbe ị na-na-ogologo nkiri na YouTube, a ga-enwe mkpali n'ihi na ị na budata ha maka offline playback? Ọ bụrụ na ee, ndị na-esonụ ga-ihe ị na-achọ.
Mmemme mkpa ka ị download YouTube fim-Wondershare AllMyTube
1. Download vidiyo si na YouTube, Facebook, Vimeo, na 1000+ pupular saịtị.
2. ogbe download videos dị ka YouTube listi ọkpụkpọ & ọwa na elu Speed
3. Download YouTube HD videos (ọbụna 1080p HD na 4k videos) na YouTube 3D videos.
4. Download YouTube elu bit-ọnụego MP3 ke kiet ke otu-click.
5. Download videos 3X ngwa ngwa na ọrụ scheduler.
6. tọghata videos ka 100+ formats maka mkpanaka ngwaọrụ.
7. Record ọ bụla video si online weebụsaịtị.
8. Nyefee video ekwentị mkpanaaka na-enweghị eriri USB.
Olee otú iji Wondershare AllMyTube ibudata YouTube fim
Nzọụkwụ 1.Install nkiri a Downloader
Download a ndutịm na n'elu njikọ awụnyere na kọmputa gị. Emeghe ya iji nweta njikere.
Nzọụkwụ 2. Download YouTube fim
Chọta YouTube zuru fim site na n'elu ngwọta na pịa videos na-egwu. Mgbe ahụ ị ga-ahụ a Download bọtịnụ na n'elu nri. Pịa bọtịnụ na programmụ a ga-amalite ibudata videos. Otu ọzọ ụzọ bụ idetuo nkiri url na pịa Paste URL button na-fim ebudatara.
Ụfọdụ n'ime nwere ike ị chọrọ na-egwu vidiyo na gị obere ngwaọrụ. Mgbe ahụ, ị pụrụ ịdị mkpa ka mbụ tọghata videos. Gaa Finished n'ọbá akwụkwọ ịchọta vidiyo na pịa tọghata bọtịnụ na nri. Họrọ a format na pịa Ok na-amalite akakabarede.